トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Tombontsoa sy ny fatiantoka mba hifidy ny fahafahana avo utilisation pachinko trano izy
Ny olon-drehetra dia, ny boky mba hifidy ny pachinko fivarotana, rivotra iainana sy ny fanompoana ny payout sy ny toeram-pivarotana, sns, ataoko fa isan-karazany teo, afa-tsy ny fandidiana sata raha te hahita soa ny fifandanjana no ho teboka ny toeram-pivarotana lehibe hisafidy.
miasa sata dia toy ny tsara ny pachinko efi-trano, dia misy koa ny matanjaka, dia inona no ho afaka ny hahatsapa azo inoana fa avy. Raha miahiahy Aiza no namely hoe: Mino aho fa maro ny olona no miditra ao amin'ny fivarotana tsara ny miasa sata. Na dia jerena avy amin'ny lafiny isan-karazany, nefa lazaiko fa izay fitambaran'ny pachinko efi-trano manokana fandraharahana no nahomby, in, ary efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko tsara ny tombontsoa sy ny fatiantoka ny fandidiana, isika dia hijery ny zavatra toy izany ny fotoana.
hetsika dia ny hoe tsara, ny zavatra ilain'ny mpanjifa rehetra, dia pachinko efi-trano izay efa tanteraka. Mandray Vahiny sy ny asa izany, mazava ho azy, anisan'ny payout Anisan'izy ireo no ho lehibe hevitra. Ao amin'ny hetsika tsara pachinko efi-trano, dia izay afaka amin'ny lafiny sasany amin'ny eo ho eo, payout tolotra. Koa isika dia afaka hahazo ara-drariny kokoa ny varotra, dia afaka manantena ny atolotra tsy tapaka ihany koa ny payout.
mazava ho azy, no indraindray koa ny daty mazava famoriam-bola teo, fa isan'andro manenjika ny modely, fa ny fandikan-teny izay avy amin'ny ny azy, arakaraka ny tanjona, dia ny mety handresy mitombo.
Ankoatra izany, isan-karazany ny mpanjifa ho avy hitsidika. Fa na dia ny tsy mahalala loatra ny pachinko avy any amin'ny toeram-pivarotana, ny sehatra mihetsika mafy koa, raha toa ny tanjona fa ny mijoro eto tsirairay, dia any mety ho maimaim-poana matetika latabatra. Ary amin'ny lafiny sasany, ka nitodika aho, fampiasam-bola vola kely ary afaka manantena izany koa mba hanao ny hira. Ny ankamaroan'ireo soa ny nihazakazaka tsara pachinko fivarotana, ianao any.
Ankoatra izany, satria ny isan-karazany ny olona tonga mitsidika, mety ho famoriam-bola vaovao. Tsara fivarotana ny mihazakazaka, ka maro mpanjifa tsy tapaka, raha amim-pahombiazana mifandray amin'ny olona toy izany, isan-karazany ny vaovao izay tiany ho faty dia zavatra avy any an-sofina.
Na izany aza, amin'ny lafiny iray, misy ihany koa mazava ho azy fatiantoka.
稼 Ny zava-misy fa ny asa tsara, tsara base hanokatra tsy ho ela dia hahazo nipetraka teo. Sns malaza modely ho amin'ny farany nijoro, dia halevina avy hatrany amin'ny mpitsidika. Mitsang?na eo ny fifaninanana ny voafantina lasa mafy, dia milaza fa hetsika tsara demerit pachinko trano izy. Mba hipetraka eo amin'ny latabatra mikendry, hatramin'ny andro teo aloha, sy ny mba hanana ny sehatra ny fanadihadiana mialoha, izay mikendry, dia mila mitsidika nifoha maraina koa.
Ankoatra izany, miaraka amin'ny closeout indray mandeha, indray mandeha ianareo miala ny latabatra, dia ny fiverenana ho olona nipetraka tao amin'ny indray mipi-maso, dia ho tena tsy vita mihitsy. Rehefa ny fampiasam-bola vola efa nitombo, izay kivy, dia tapa-kevitra ny mampihetsi-po na ny sehatra, lazaiko fa iray amin'ireo demerit ho sarotra.
miasa tsara sata toeram-pivarotana, dia tsy misy isalasalana fa tsara fivarotana. Izao no voalaza ny toeram-pivarotana izay Mitambatra ny hatsarany mba manintona ny olona, ??fa ny zava-misy fa toy izany tombon-dahiny koa, avy mialoha sy ny ady ny olona niova ihany koa ny mahatsiaro.